Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa isbeddelka cirifku inuu noqon karo musiibo - BGR - teles relay
Ulaha birlabda magnetku si joogto ah ayey u socdaan, laakiin kama ay leexleexan in ay ku soo afjaraan casriga casriga ah
Cilmi-baarayaashu waxay ogyihiin in tiirarka dhulku horay u soo jeesteen, laakiin fikradda ayaa lagu kala qaybsamay saameynta ay dhacdo noocan oo kale ah ku yeelan karto meeraha iyo dadka deggan.
Maanta, cilmi-baaris cusub ayaa soo jeedinaysa in wareegga birlabta birlabku qiyaastii 42 sano ka hor uu keenay isbeddello waawayn oo laga yaabo inuu beddelay dariiqa taariikhda aadanaha.
Filimmada musiibada ah ayaa ina tusay waxa Hollywood ay u maleyneyso inay dhici karaan haddii tiirarka Dunida si lama filaan ah u soo jeestaan, laakiin xaqiiqda xaaladdu waxay u badan tahay inay aad uga duwanaan doonto. Ma garanayno sida saxda ah ee nolol maalmeedka saameyn ku yeelan laheyd haddii tiirarka magnetka ee meeraheenna si lama filaan ah ugu soo boodo, laakiin saynisyahannadu waxay had iyo jeer raadinayaan caddayn dhaqdhaqaaqyadii hore ee polarka si ay fikrad fiican uga helaan waxa aan ku leennahay.
Daraasad cusub oo lagu daabacay Science wuxuu ina siinayaa macluumaad waxtar leh oo aad ugu mahadnaqeyso geed aad u duug ah. Geedka, oo wali sii kordhayay markii uurkii ugu dambeeyay ee magnet-ka uu dhacay qiyaastii 42 oo sano kahor, wuxuu si maldahan u sheegayaa isbadalada layaabka leh ee laga yaabo inay masiibada ku tahay jawiga iyo dusha dhulkeena.
sida Idaacada Qaranka warbixinnada, saynisyahannadu waxay awoodeen inay isticmaalaan geed, oo muddo dheer dhintay laakiin si fiican loo ilaaliyay, si ay si fiican ugu fahmaan baaxadda ballaaran ee taariikhda Dhulka. Markii ay baranayeen siddooyinkii geedka, saynisyahannadu waxay heleen khasaare faahfaahsan oo qiyaastii ah 1700 sano. Geedkani wuxuu noolaa markii ugu dambaysay ee ay birlabta birlabku leexato, falanqaynta siddooyinkuna waxay muujinayaan inay ahayd wakhti adag oo ku saabsan wax kasta oo ku nool Dunida.
Kooxda waxay si gaar ah u raadinayeen saxiixa kaarboonka giraanyada geedka. Nooca saynisyahannada kaarboonka waxay raadinayaan waxaa la abuuray markii falaadhaha cirka ay ku dhici karaan jawiga Dunida. Marka aagga magnetka ee dhulku xoog yeesho, sida uu maanta yahay, xaddiga kaarboon ay soo saarto is-dhexgalkani waa mid yara yar, laakiin wuu sii kordhayaa kolba maadada magnetic-ka oo daciifaysa oo u oggolaanaysa falaadho badan oo cimilo ah.
Cilmi baarayaashu waxay awoodeen inay ka helaan taajir gaar ah noocan gaar ah kaarboonka giraangiraha geedka oo la soo saari lahaa inta lagu gudajiro isbeddelka cirifka, iyagoo soo jeedinaya in dhacdada noocan oo kale ah ay si toos ah ula xiriirto isbeddel baaxad leh oo ku yimid xoogga aagga birlabta.
"Diiwaankani wuxuu muujinayaa koror ballaaran oo ku jira kaarboon-14 ka kooban jawiga ugu sarreeya inta lagu jiro mudada daciifinta xoogga aagga magnetka ee ka horreeya isbeddelka 'polarity", Science Sharax. Qorayaashu waxay qaabeeyeen cawaaqib xumada dhacdadan waxayna ku soo gabagabeeyeen in ugu yaraanta geomagnetic ay sababtay isbedello la taaban karo oo ku yimid fiirsashada ozone ee jawiga taasoo keentay isbadal isku mid ah oo ku yimid cimilada adduunka iyo deegaanka.
Baarayaasha ayaa rumeysan in dhacdadani ay dhulka ku maydhan laheyd falaadhaha loo yaqaan 'ultraviolet rays' sababo la xiriira daciifnimada birlabta magnetka iyo dhaawaca soo gaadhay lakabka ozone ee raaci lahaa Xitaa waxaa laga yaabaa inay kicisay baabi'inta noocyo badan. Weli ma hayno waddo aan ku ogaan karno goorta iyo sababta ay ulaha birlabku u soo noqonayaan, laakiin wakhti kasta oo mar kale soo noqnoqda waxaan la kulmi karnaa waqti adag.
Maaskaradan casriga ah waligood horay uma iibin - hadda waxay yihiin $ 2 doolar midkiiba! Liiska qiimaha:26,75 $ Price:$ 19,99 ($ 2,00 / lambar) Waxaad badbaadinaysaa:$ 6,76 (25%)
Mike Wehner wuxuu ka warbixiyay teknolojiyadda iyo ciyaaraha fiidiyowga tobankii sano ee la soo dhaafay, isagoo daboolaya wararkii ugu dambeeyay iyo isbeddellada ku yimid xaqiiqda dhabta ah, qalabka la gashado, taleefannada casriga ah iyo tikniyoolajiyadda mustaqbalka.
Ugu dambayntiina, Mike wuxuu u adeegay qoraa farsamo ee The Daily Dot waxaana lagu soo bandhigay USA Today, Time.com, iyo degello kale oo aan la tirin karin oo daabacan. Jacaylkiisa
sheekadu waa mid sax ah kadib balwadiisa khamaarka.
Le CDC dit qu’il y a une chose que vous ne devriez pas faire…
Waa inaad iska hubisaa ukuntaan cajiibka ah ee Easter-ka…
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore (Ingiriis) https://bgr.com/2021/02/21/pole-flip-earth-magnetic-fields/
Waa inaad ku hubisaa ukunta cajiibka ah ee Easter-ka raadinta Google -…
Jiirkaani cajiibka ahi waxay ku beddelaan midabka hoosta iftiinka UV - BGR